पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो ! | सुदुरपश्चिम खबर
पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो !
२८ माघ, काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने ग्यास र पट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल तथा डिजेल र मट्टतिेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
अब काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य ११२ र डिजेलरमटितेलको ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । एलपी ग्यासको मूल्य पनि अब बढेर प्रति सिलिन्डर १४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले सिलिन्डरमा २५ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो । खाना पकाउने ग्याँसको भाउ एक वर्षपछि बढेको हो ।
कञ्चनपुरमा विकास निर्माण: कतै ठेकेदारको लापरवाही, कतै प्रक्रियाले प्रभावित !
सरकारले ल्यायो कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड : पायक पर्ने स्थानमा सरुवा हुन सक्ने !